2018 I-China ye-12 (i-Dongguan) Itheyiphu Yokunamathela Yamazwe Ngamazwe, Ifilimu Evikelayo kanye Nombukiso Wefilimu Obonakalayo | I-KV Adheisve
2018 I-China ye-12 (Dongguan) Itheyiphu Enamathelayo Yamazwe Ngamazwe, Ifilimu Evikelayo kanye Nombukiso Wefilimu Obonakalayo
Kusukela yasungulwa ngo-2007, i-China (Dongguan) umbukiso wezobuchwepheshe bokukhiqiza amafilimu aphezulu kanye ne-adhesive tape, ifilimu evikelayo kanye nombukiso wefilimu optical (CAPE) isiphenduke inkomba yemakethe kanye ne-vane yefilimu esebenza kahle kakhulu, i-die-cutting, i-adhesive tape, isivikelo. ifilimu kanye nefilimu yokubona eSouth China, kanye nenketho yokuqala yabakhiqizi ukukhipha imikhiqizo emisha kanye nokusakazwa kwezithombe. Ifilimu esebenza kahle kakhulu, itheyiphu yokunamathisela, imishini yokucubungula kanye nezinto ezihlobene njengombukiso owumongo. Ngaphezu kokuheha ukucutshungulwa kwe-die-cutting, ukukhiqizwa kwefilimu kanye nabakhiqizi bezithombe zombane wezithombe abavela embonini, kuncike enzuzweni yendawo yeqoqo lemboni yomakhalekhukhwini kanye ne-docking engenamthungo endaweni yokukhiqiza, umbukiso wamazwe ngamazwe wokukhiqiza amafilimu asezingeni eliphezulu kanye ne-adhesive tape, ifilimu yokuvikela kanye nombukiso wefilimu obonakalayo waqoqa okuningi kusukela kusikrini sokuthinta, umakhalekhukhwini, izinto zikagesi ezithengwayo, isibonisi sezithombe zikagesi, izinsiza zokukhiqiza ngogesi, izimoto, abathengi abangochwepheshe bezokwelapha bezinkambu zezicelo ezisezingeni eliphansi ezifana nokwelapha namandla amasha bama ukuvakashela.
Umhleli uzophinde ahlinzekele ngezinsizakalo zokufanisa ibhizinisi esizeni kubabonisi befilimu, i-adhesive tape, imishini yokucubungula kanye nezinto ezihlobene. Imikhiqizo engaphezu kuka-100 kanye nemikhiqizo emisha engaphezu kuka-500 yaqoqwa endaweni yokugcina yombukiso, nendawo yombukiso engu-30000 square metres. Indawo yombukiso ihlelelwe ukuthi ibe ngamamitha-skwele angama-30000, kusethwe amadokodo asezingeni lomhlaba angama-800, kanti kulindeleke ukuthi kubuthene ababukisi bemikhiqizo basekhaya nabangaphandle abangaphezu kuka-320. Uhlu lwesilinganiso esikhulu kanye nomthelela wamazwe ngamazwe kuzoba kakhulu esikhathini esidlule!
I-Adhesive tape: zonke izinhlobo ze-adhesive tape yefilimu ehlukahlukene, iphepha, indwangu, i-foil, igwebu nezinye izinto eziyisisekelo.
Ifilimu yokuzivikela:I-PE, isilwane esifuywayo, i-OPP namanye amafilimu avikela inqubo; i-anti scratch, i-explosion-proof, i-anti glare, i-anti voyeurism namanye amafilimu okuvikela asebenzayo; ifilimu yokukhishwa kwebanga lokubona / iphepha lokukhulula & nephepha elimboziwe nezinye izinto ezisizayo neziyisisekelo.
Ifilimu ye-Optical:ifilimu ekhanyayo, ifilimu yokusabalalisa, ifilimu ekhanyayo, ifilimu ye-polarized, ifilimu eyinhlanganisela ekhanyayo, ifilimu eqhuba ukukhanya namanye amafilimu optical for backlight / display; ifilimu evikela amehlo, ifilimu eqinisayo / ifilimu ephikisana nokuklwebheka / ifilimu elimelene nekhamera / ifilimu engaqhumi / ifilimu ephikisayo, ifilimu ye-ITO, i-OCA optical glue namanye amafilimu esikrini sokuthinta / sokubonisa.
Ifilimu esebenzayo (yezimboni): I-BOPET, ifilimu ye-PET / CPP, ifilimu eyisisekelo yokukhishwa, ifilimu yesisekelo se-adhesive, ifilimu yokuhlobisa ye-IMD, ukushisa kwe-graphite, ukushisa ukushisa / ifilimu yemoto (ifilimu), ifilimu yewindi, ifilimu ekhanyayo, ifilimu evelele, ifilimu evikelayo, ifilimu ye-antistatic, njll. .
Ukunemba nokucutshungulwa okunembayo: imishini yokugqoka enembile, umshini wokusika, umshini wokusika, i-coiler, umshini wokugcoba, itafula lokusika elizenzakalelayo, umshini wokusika / umshini wokufa, umshini wokuthungatha, imishini yokuhlanganisa.
Ukwakhiwa kwefilimu: ulayini wokukhiqiza ifilimu ophephethayo, ulayini wefilimu extrusion, umshini wokusakaza ifilimu, umshini wokudweba, umshini wefilimu osongayo.
Ukutholwa kanye nezinsiza: ukutholwa kwesici sefilimu eku-inthanethi, ukumboza okokusebenza okuku-inthanethi kokuqina, umshini wokwelapha we-UV, okokomisa okomshini, okomshini we-corona / ukwelapha uthuli lwefilimu optical, isilawuli sokulawula ukushuba / ukuchezuka kwesilawuli sokuqondisa, i-blade, idivayisi yokuhlunga, i-rubber enamathelayo, isicoci se-electrostatic, ion ifeni, i-clutch, umshini wokumboza imfucuza imishini yokwelapha igesi, njll.
Izinto ezingavuthiwe nemikhiqizo yamakhemikhali: izinto zokusetshenziswa kanye nemikhiqizo yamakhemikhali ukuze kukhiqizwe ifilimu esebenzayo kanye ne-adhesive tape, okuhlanganisa ukunamathela, i-ejenti yokukhulula, i-resin, ijeli ye-silica ephilayo, iglue yefilimu evikelayo, ukumbozwa kwefilimu, i-masterbatch, i-hot melt adhesive, i-ejenti eyisizayo, uyinki, njll.